” ကိုယ်စီ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ” ကိုယ်စီ “	15
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jan 24, 2016 in Photography | 15 comments
” ကိုယ်စီ ”
Ma Ma says: ပုံတစ်ပုံချင်းစီက ခြားနားတဲ့ရသတစ်မျိုးစီပေးတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒါကြောင့်လဲ ကိုယ်စီ လို့ ပေးလိုက်တာ မမရေ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကိုယ်စီ ဘိုနီ အိုပြီ မျိုသည် စိုပြည်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အပေါ်ကြိုက် ခေါ်လိုက်
naywoon ni says: ဘ၀ ကိုယ်​စီ ရှိကြ​လေသည်​ ​ပေါ့​လေ ။ ဒါလည်း ကိုယ်​ချင်းစာတရား ပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သူ့ဘဝ
အဂ္ဂမဟာ ပြောင်ကြီး says: . မဲ . လေး . ခွေး . ငှက်
. မဟုတ်မှ လွဲရော
. ဒါ အတိတ်စိမ်း ပေးတာပဲ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အေဘေးရီး
အဂ္ဂမဟာ ပြောင်ကြီး says: ​ဟေ့​ရောင်​ ​မြောက်​ကြီး
​ငါလို ​ပြောင်​ကြီးကိုများ ​အေ​ဘေးရီး ​လေး ဘာ​လေးနဲ့ ဆဲရဲဆိုရဲတယ်​​ပေါ့​လေ
တခါတည်း စိတ်​ရှိလက်​ရှိ ပွတ်​ထည့်​လိုက်​လို့ ​မြောက်​ကြီး က​နေ ​မြောက်​​ပြောင်​ကြီး ဖြစ်​တွားအုံးမယ်​ ဟင်းဟင်းဟင်း
Ma Ei says:4အပူအပင်မဲ့ က အရိပ်နှစ်ကြောင်းကိုသာဖယ်လိုက်ရင် တစ်ကယ် ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါဘဲ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မအိရေ ကျနော်က အရွက်လေးတွေ
အကိုင်းလေးတွေ ကို ရှေ့က ခပ် ဝါးဝါး လေး
သင့်အရိပ် says: ကိုယ်စီ…. ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့…ခံစားမိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သင့်အရိပ်
အောင် မိုးသူ says: ကိုယ်စီ……. တာဝန်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တာဝန် ကိုယ်စီ ရှိကြသည်